(၁) နှင်းခူး‌ရောဂါအ‌ကြောင်းနှင့်‌ကုသပုံ၊ ဘယ်လိုကာကွယ် ရမလဲဆိုတာ ‌ပြောပြ‌ပေးလို့ရပါသလားဆရာ။ ပြီး‌တော့ ပြန်မဖြစ်‌‌အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ။ (၂) Eczema ရောဂါကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲနေရပါတယ်။ ဖြစ်တာ တစ်လလောက် ရှိပါပြီ။ ပြည်ပတိုင်းပြည်မှာ ရောက်နေတာပါ။ ဒီရောဂါရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ နဲ့ ရှောင်ရန်-ဆောင်ရန်လေးတွေ သိချင်ပါတယ်။ (၃) Clobetasol Propionate and Neomycin Sulphate Skin Cream (Tenovate GN) contains: Clobetasol Propionate BP 0.05% w/w; Neomycin Sulphate IP 0.5% w/w; Imidurea USPNF (as preservative) 0.3% w/w လိမ်းဆေးအကြောင်း သိပါရစေရှင့်။ အရေပြားမှာ ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့အနာတွေကို Dermatitis အရေပြားနာလို့ ယျေဘုယျခေါ်တယ်။ အများဆုံးဖြစ်တာက Eczema (Atopic dermatitis) နှင်းခူနာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလဲ အမျိုးအစားတွေ များတယ်။ ဘယ်အရွယ်မဆို ဖြစ်တယ်။ ကျား-မ မရွေးဖြစ်တယ်။ ၅ နှစ်အောက် ငယ်သူတွေမှာ အဖြစ်သိပ်နည်းတယ်။ ငယ်သူတွေ ဖြစ်ရင် ပျောက်တာများတယ်။ ကြီးမှဖြစ်ရင် မပျောက်နိုင်တာ များပြီး မျိုးရိုးလိုက်နိုင်တယ်။ မိသားစုထဲမှာ (အလာဂျီ) ရတတ်သူတွေ ရှိနေမယ်။ ပန်းနာတို့ ဟိုဟာမတည့် ဒီဟာမတည့်ဖြစ်တာတို့ကို ပြောတာပါ။ လူကြီးတွေ ၁ဝဝ မှာ ၁-၂ ယောက်၊ ကလေးဆိုရင် ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက် ဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုများတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်ပါ။ စဖြစ်လာပုံကလဲ တယောက်နဲ့တယောက် မတူတတ်ဘူး။ ဖြစ်မဲ့နေရာမှာ နီရဲလာမယ်၊ ယားမယ်၊ ပူလောင်နေမယ်၊ ကုတ်ရင်းကနေ အဖူးပေါက်လာ၊ အနာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကြာတော့ အရေပြားက ထူလာမယ်။ ခေါင်းကနေ ခြေထောက် နှင်းခူနာ ပေါက်နိုင်တယ်။ ဘာလို့ လာဖြစ်ရသလဲ။ ဆရာဝန်တွေ သိပ်နားမလည်ကြသေးပါ။ မတည့်တာနဲ့ တွေ့ထိတာကနေ စတယ်ဆိုတာတော့ သေခြာတယ်။ ဆပ်ပြာ၊ အလှအပပစ္စည်း၊ အဝတ်အစား၊ အစားအသောက်၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ချွေးထွက်တာ၊ အမှုံအမွှား၊ ဓါတုဆေးရည်၊ လေစိုထိုင်းဆ နည်းတာ၊ မတည့်တဲ့ လိမ်းဆေး၊ အဝတ်အစားကြမ်း၊ ချွေး၊ ရာဘာ၊ ပလပ်စတစ် အသုံးအဆောင်၊ ပွတ်တိုက်မှု၊ ဗက်တီးရီးယား၊ တမျိုးမျိုးကို ဆက်တိုက် ကိုင်တွယ် နေရတာတွေကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့ကြ ရာသီဥတုနဲ့ ဆိုင်တယ်။ တချို့မှာ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြန်သေးတယ်။ အမျိုးအစားတွေကို ဆေးပညာအရတော့ ခွဲထားတယ်။
3. (ကော်တီကိုစတီရွိုက်) လိမ်းဆေးတွေက ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။ ဒီဆေးမျိုးတွေကလဲ ခပ်ပြော့ပြော့၊ ခပ်လတ်လတ် နဲ့ အပြင်စားတွေ ရှိတယ်။
6. Ultraviolet light therapy ခရမ်းလွန်-ရောင်ခြည်နဲ့လဲ ကုနိုင်တယ်။
7. Cyclosporine ရောဂါပြီးတာကို သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးမျိုးကိုလဲ တခါတလေ သုံးနိုင်တယ်။ Coal tar သုံးနိုင်တယ်။
• Tenovate-GN cream လိမ်းဆေးဟာ Corticosteroid-responsive dermatoses အရေပြားနာတွေထဲက (စတီရွိုက်) ဆေးနဲ့ သက်သာစေနိုင်တဲ့ အနာတွေအတွက် ဖြစ်တယ်။ နာတာရှည် အနာ၊ ယားနေတာ၊ နီရဲ နေတာတွေအတွက် ဖြစ်တယ်။ ပိုးထပ်ဝင်နေတာအတွက် Neomycin Sulphate ဆေးပါ ထည့်ထားတယ်။ တနေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေ မသင့်ဘူး။ ဆေးလိမ်းလို့ မတည့်သူလဲ ရှိတတ်တယ်။ နှလုံးရောဂါတွေနဲ့ သွေးတိုးရှိသူတွေ မသင့်ဘူး။ ဆီးချို၊ ဝက်ရူးပြန်၊ ရေတိမ်၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း နည်းသူ၊ အသဲမကောင်းတော့သူ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းသူ၊ စိတ်ရောဂါ ရှိသူတွေနဲ့ မသင့်ဘူး။ မျက်စိထဲ မဝင်စေရဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် Category C သတ်မှတ်ထားတယ်။ မသင့်ဘူး။ အထဲကကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
၂၄-၁၁-၂ဝ၁၁ သတင်း Cure for eczema comes closer to reality ပျောက်ခဲလှတဲ့ နှင်းခူနာအတွက်ဆေး ပေါ်နိုင်တော့မည်
ပညာရှင်တွေကနေ အဲလိုအနာမျိုး ဖြစ်စေတဲ့ Yeast (ရိစ်) မှိုတမျိုးကို တွေ့ရှိ ဖေါ်ထုတ်လာနိုင်လို့ပါ။ ဒါကို Peptides (ပက်ပ်တိုက်) တမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးဖေါ်နိုင်စရာ ရှိလာပါပြီ။ ကလေး၊ လူငယ်၊ လူကြီး၊ ကျာ-မ မရွေး ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ နာတာရှည် အရေပြားရောဂါအတွက် ဆေးကောင်း လိုနေပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ကလေး ၂ဝ% မှာ Atopic eczema နှင်းခူနာတမျိုး ဖြစ်ကြတယ်။ လူကြီး ၇% မှာလဲ ရှိတာက တချို့မှာ သေရာပါအနာ ဖြစ်တယ်။
လူအတော်များများမှာ ရောဂါမပေါ်ပေမဲ့ ဒီ (ရိစ်) က ရှိနေတတ်တယ်။ ကြာတော့ အရေပြား အားနည်းလာပြီး၊ အပေါက်အပြဲဖြစ်ရာကနေ ပိုးကနေ ရောဂါ ရစေတော့တယ်။ ဆွီဒင်မှာရှိတဲ့ Karolinska Institute ကပညာရှင်တွေကနေ (ပက်ပ်တိုက်) ၂၁ မျိုးနဲ့ စမ်းသပ်နေကြတယ်။ ကောင်းနေတဲ့ အရေပြား (ဆဲလ်) တွေကိုလဲ မထိခိုက်စေအာင် ကြည့်ရတယ်။ သတ္ကိ ၂ မျိုးရှိတယ်။ (ဆဲလ်) အဖုံးလွှာကို ဖေါက်ဝင်နိုင်တာ နဲ့ ပိုးတွေကို သေစေတာ။
၂၁ မျိုးထဲက ၆ မျိုးဟာ (ရိစ်) တွေကို သေစေနိုင်တာ တွေ့လာရတယ်။ တခြား (ဆဲလ်) တွေကို မထိခိုက်စေဘူး။ ဆေးအဖြစ်အသုံးချနိုင်ဘို့ရာ မေးခွန်းတွေ အများကြီးတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလို ဆေးနဲနဲ နဲ့ ပိုးကိုသေစေပြီး လူကို မထိခိုက်တာဟာ (ဖန်းဂတ်စ်) ဆေး ဖေါ်ဘို့ အလွန် အလားအလား ကောင်းပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 6:06 PM